Kusungulwe i-app yokupha abetha uphethroli imali
ESIKHUNDLENI sokuthi uphe umuntu okusizayo egaraji imali engukheshi usukwazi ukumupha usebenzisa i-app Isithombe: SITHUNYELWE
Thokozani Ndlovu | September 15, 2021
ABAKWA-ENGEN sebesungule i-app ezosiza amakhasimende ukuthi akwazi ukupha abasebenzi bakhona imali uma bebonga ngokusizwa kahle uma bezokwetha uphethroli noma bethenga khona.
Ngokubambisana neTelkom Financial Services, i-Engen isungule i-1app (Tip an Attendant) ukwenza umsebenzi ube lula uma ungenayo imali ephaketheni yokupha okusize kahle.
Abetha uphethroli nabashaya izisefo kwa-Engen bazobhalisa kwiTelkom Pay Wallet besebenzisa izinkundla zabo zokuxhumana njengeWhatsApp bafake nemininingwane yabo khona. Lokho kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthola imali abayiphiwa ngamakhasimende ebonga kwi-Engen 1app.
“ Ukusiza amakhasimende ethu ngendlela ezowagculisa yinto esiyihambisa phambili kwa-Engen, yingakho siza nalolu hlelo lweTip an Attendant, okuyindlela yokubonga kwabetha uphethroli nabashaya izisefo emagaraji ethu. Nabo siyabagqugquzela ukuthi basize amakhasimende ethu ngendlela ezowagculisa. Isifiso sethu ukuthi lolu hlelo lweTip an Attendant silusabalalise nakwezinye izindawo ngaphandle kwase-Engen,” kusho iMenenja uNaidoo.
Ngenxa yesimo seCovid-19 amakhasimende amaningi akwa-Engen ayakwazi ukuyiDownloader le e-app kumaselula awo ngaphandle kokuthi aze aye kwa-Engen.
“Sigqugquzela ukuthi amakhasimende ethu abe nayo le app. Lokho kuzowasiza ukuthi angazixaki ngokuthi aphathe imali noma ikhadi lasebhange uma eyokwetha uphethroli kwa-Engen njengoba ukwazi ukuyisebenzisa ukukhokha. Ngokuyisebenzisa uphinde uthole namaphoyinti angena kwaClicks Clubcard neFNB eBucks,” usho kanje.
Imenenja kwaTelkom Financial Services, uSbusiso Ngwenya uthe bajabule ukusebenzisana ne-Engen kule app.
“ Ukuxhumanisa abantu umsebenzi wethu, lokhu kuveza eminye yemisebenzi yethu. Le ndlela izosiza amakhasimende ukukhokha ngendlela elula engadingi ukuthi uze uphathe imali namakhadi asebhange,” kusho uNgwenya.
Lena ngenye yezindlela eyenza impilo ibe lula kumakhasimende eqhamuke nabakwa-Engen njengoba kukhona nohlelo lokuthumela impahla kwenye indawo lakhona olubizwa ngeDSV.